အကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုစာအုပ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစာအုပ် ၂၂ ခု ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
မင်္ဂလာပါ၊ သင်ရှာတွေ့မည့်ဤဆောင်းပါးကို ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်သင့်အားပထမဆုံးဂုဏ်ပြုပါသည် အွန်လိုင်းတွင်နားထောင်ရန်အခမဲ့အော်ဒီယိုစာအုပ် ၁၇ လုံးသုံးသပ်ချက် ၇ ခုနှင့်ဆောင်းပါး ၆ ခုရှိသည် Self- အကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေ။
သင်သည်သင်၏ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကျော်လွှားရန်နှင့်သင်၏ဘဝအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသူဖြစ်သည်။ သငျသညျကျောက်ဆူးရှိနေဆဲနှင့်မည်သည့်လမ်းကိုသွားမသိကြသူမြား၏တ ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။
ဘဝသည်သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စာအုပ်များသည်သင်ယူခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Self- တိုးတက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု။ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည် အရင်းအမြစ်များကို Autoayuda.comအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်တွေအပြင်၊ မင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးမယ်၊ မင်းရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ကူညီမယ်၊ ရံဖန်ရံခါမင်းရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ကူညီမယ်ဆိုတာကိုငါအာမခံနိုင်တဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ဆောင်းပါးတွေနဲ့ဗွီဒီယိုတွေလည်းရှိတယ်။
အောက်တွင်တွေ့ရမည့်စာရင်းတွင်အကောင်းဆုံးကိုယ်ထူကိုယ်ထစာအုပ်များကိုစုစည်းထားပါသည်။ တချို့ကတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးလက်ရှိ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘ ၀ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုထောင့်အသစ်တွေကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ကအမြဲတမ်းပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဖတ်ဖို့၊ နားထောင်ဖို့သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
1 အကြံပြုထားသည့် Self-help စာအုပ်များစာရင်း။
အကြံပြုထားသည့် Self-help စာအုပ်များစာရင်း။
အော်ဒီယိုစာအုပ် ၁၇ ခု ဘာကြားနိုင်လဲ အွန်လိုင်း လုံးဝ အခမဲ့.
8 စာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အများဆုံးလက်ရှိနှင့်အရေးကြီးသော။
6 ပစ္စည်းများ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: သူတို့တစ်ခုတည်းဘုံ link ကိုရှိသည်။
ဤစာရင်းများတွင်ဖြစ်ကြသည် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်များ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလူထုအတွက်ထောက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများရှိပါတယ် အကြံပြုခဲ့သည် အမြင့်ဆုံးသောစိတ်ပညာရှင်များကသူတို့၏လူနာများ၏အမြင်ကိုကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်မှကျယ်ပြန့်စေပြီး၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့လေးစားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ငါထင်တာကတော့တိုးတက်ချင်တဲ့သူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ခေါင်းစဉ်တွေ၊
သစ်ပင်များကိုစိုက်သူ။ လူတစ် ဦး ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအလုပ်ကအံ့ဖွယ်အရာတစ်ခုခုကိုမည်သို့ ဦး တည်သွားစေနိုင်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည့်လှပသောပုံဆောင်စာအုပ်ဖြစ်သည်။
"သင်၏အိပ်မက်ကိုတည်ဆောက်ပါ"။ စာရေးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရေးကြီးသောမေးခွန်းများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအဖြေများပေးသောစာအုပ်တစ်အုပ်။ ကြီးမားသောပန်းတိုင်များပြည့်မီလိုသူအားလုံးအတွက်အလွန်သင့်လျော်သောစာအုပ်။
"ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရောင်းသူ"။ ကျွန်ုပ်တို့ဘ ၀ အတွက်အောင်မြင်မှုရရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပေးသောကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်မှာဝတ္ထုတစ်ခုအနေနှင့်ဖြစ်သည်။
"ကံကောင်းပါစေ"။ ဤသူကားငါအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များနှင့်စာရေးဆရာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလိုကံကောင်းခြင်းမျိုးမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ဖို့အကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုကမင်းအဲဒါကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ လက်ရာမြောက်သောပုံပြင်။
"Alchemist"။ နောက်ထပ်စာပေ၏ဤအမျိုးအစား၏အကြီးအဂန္ထဝင်။ ကျနော်တို့ကဘဏ္searchာရေးရှာဖွေရေးအတွက်အသွင်ပြောင်းခရီးအပေါ်၎င်း၏ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူလိုက်ပါ။
«အတွင်းပိုင်းသံလိုက်အိမ်မြှောင်»။ employeelex Rovira က ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကသူ၏သူဌေးထံစာရေးသည့်စာများစွာမှတစ်ဆင့်ဘဝတွင်အကျိုးရှိသောအရာများကိုပြသည်။
"သူ့ Ferrari ကိုရောင်းခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီး" ။ အောင်မြင်သောရှေ့နေတစ် ဦး သည်နှလုံးရောဂါခံစားနေရသောဒဏ္himာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကသူ့အားသူ၏ဘ ၀ ကိုပြန်လည်စဉ်းစားစေသည်။
"သင်၏ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်း ၁၀၁ ခု"။ ဝိန်းဒိုင်ယာကသင့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဒီအော်ဒီယိုစာအုပ်ကိုပေးတယ်။
"မင်းကိုပြောခွင့်ပြုပါ"။ သူ့ဘဝ၏အရေးကြီးဆုံးသောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေကိုရှာသောကောင်လေးတစ်ယောက်သည် El gordo နှင့်စကားပြောခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သွားသည်။ သူသည်ထင်မြင်ချက်များနှင့်ကောက်ချက်များဆွဲနိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသောပုံပြင်များကိုစတင်ပြောပြသည်။
"ချမ်းသာသောဖခင်ဆင်းရဲသောဖခင်"။ Robert Kiyosaki သည်ဤဇာတ်လမ်းကိုရေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ဘဏ္financeာရေးလောကမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုရရှိရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
"သင်၏မှားယွင်းသောဒေသများ"။ ဒါကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုတဲ့စာအုပ်ပါ။ ဝိန်းဒိုင်ယာကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ပျော်ရွှင်ပါ။ ဘဝ၌ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများကြားမှပျော်ရွှင်မှုကိုသင်ပေးရန်စာအုပ်တစ်အုပ်။
«မင်းကလူ ၅ ယောက်ကိုကောင်းကင်မှာတွေ့လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ဇတ်ကောင်သေဆုံးပြီးကောင်းကင်၌သူ၏အသက်တာကိုအလွှမ်းမိုးဆုံးသောလူငါးယောက်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်စာအုပ်ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်မှု၏ ၇ ဝိညာဉ်ရေးရာနိယာမများ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသန်းနှင့်ချီသောလူများသည်ဘဝတွင်အောင်မြင်မှုရရန်သော့ချက်များကိုရှာဖွေရန်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခဲ့ကြသည်။
Deepak Chopra မှ "The Wizard of Path"။ ဘဝကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်သည်သင်ခန်းစာများစွာပေးသည်။
Antoine de Saint-Exupéryမှ "Little Prince"။ ဤစာအုပ်သည်လက်ရာမြောက်သောကြောင့်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အထူးအကြံပြုလိုသည်။
သော့ ၄ ချပ် - သင်၏လွတ်လပ်မှုတံခါးကိုဖွင့်ပါ
Eduard Punset: «စိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးစဉ်»
Creative စိတ်: ဖန်တီးမှု၏ခန္ဓာဗေဒ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုစာအုပ် ၁၁ ခု
တစ်နှစ်လျှင်စာအုပ်ပေါင်း ၁၈၀ ဖတ်ပါ
Self- အကူအညီစာအုပ်များ: အန္တရာယ်ရှိသော?
တိုးတက်စေရန်စာအုပ်များ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Recuerda Que အရေးအကြီးဆုံးအရာကသင်ခံစားရပုံ ထိုနေရာမှလမ်းလျှောက်ပါ။ ဤစာအုပ်များကသင့်အားအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်ကူညီလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်ရေးထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏ရှုထောင့်ကိုအမြဲတမ်းလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။ ဒီစာအုပ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အကြံဥာဏ်တော်တော်များများဟာမင်းနဲ့မတော်ဘူး။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စံသတ်မှတ်ချက်ကိုခံယူပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခြေအနေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
နောက်တဖန်သင်တို့ကိုငါဂုဏ်ပြုပါတယ်။ သင်ဟာဘ ၀ မှာကျောက်ချရပ်နားရန်မကြိုးစားဘဲတိုးတက်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာအုပ်များ » 22 အကောင်းဆုံး Self- အကူအညီနှင့် Self- တိုးတက်မှုစာအုပ်များ
62 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Yaneth Vivas Gonzalez နေရာရှာသူပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Yaneth Vivas Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
Lupita ruiz ဟုသူကပြောသည်
Lupita Ruiz အားစာပြန်ပါ
Shelly Hari Salinas Soto ဟုသူကပြောသည်
Shelly Hari Salinas Soto အားစာပြန်ပါ
ကားလို့စ် ကာမီလို ဟုသူကပြောသည်
Carlos Camilo ကိုပြန်သွားပါ
Isabel sanchez vergara ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီလမ်းညွှန်စာအုပ်တွေနဲ့ပြPROနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါဖတ်ချင်တယ်၊ ငါအဲဒီလိုအသုံးချတဲ့အခါငါလိုအပ်တာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါငါလုံးဝမခံစားရတော့ဘူးဆိုတာကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖတ်ဖို့ငါ \_ t ကြင်ဖော်မဲ့ဆောင်းပါးတခုခုမှာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနေသင့်တယ် !!! ငါဒီလမှာနှစ်လနီးပါးကြာခဲ့ပြီ၊ အိုင်တီမှာနှစ်လနီးပါးရောက်နေပြီလားဆိုတာငါသိဖို့သင်ကူညီနိုင်မလား။ ကျေးဇူးပြု !!!
Isabel Sanchez Vergara အားပြန်ပြောပါ
သင် "မှီဝဲခြင်း" မတိုင်မီသင်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်နားမလည်သောစကားလုံးတစ်လုံးတွေ့လိမ့်မည်။ စကားလုံးတစ်လုံး၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသောအခါများသောအားဖြင့်ထိုသို့ဖြစ်တတ်သည်။ အမြဲတမ်းအဘိဓာန်ရှိရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အဲဒါကဘယ်လိုကူညီသလဲဆိုတာသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
Gabriela အဲလစ်ဇဘက်ဖာနန်ဒက် ဟုသူကပြောသည်
look isabel ငါကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမှသင်ဖတ်ရှုရမည့်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်သင်ဖြုန်းတီးနေသောအချိန်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်စာအုပ်ကိုလျှို့ဝှက်စွာ သုံး၍ စာမျက်နှာများကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖတ်သောအခါငါစာမျက်နှာများကိုကျော်သွားသည်။ အချို့ဖတ်ခြင်း သူတို့ကိုငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးအခြားသူများကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ခဲ့ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ဖတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဖတ်ရှုနားလည်ရန်အချိန်မဟုတ်သေးပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ကျွန်ုပ် ငါယခင်ကသတိမထားမိသောအရာများကိုကြည့်ခြင်း၊ နားလည်နိုင်ခြင်း၊ ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အချို့သောစာအုပ်များသည်သူတို့ဖြစ်ရမည့်အချိန်နှင့်အခြားတစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ထိတွေ့သောအရာများအတွက်ငါယုံကြည်သည်။
Gabriela Elizabeth Fernandez အားပြန်ပြောပါ
Daniel Vergara Pelaez ဟုသူကပြောသည်
ငါအဲဒီအကြောင်း Self- အကူအညီနဲ့စာအုပ်အကြံပြုနိုင်ပါတယ် ... hahaha ဟာသ!
Daniel Vergara Peláezအားပြန်ပြောပါ
Gabriela iela လိရှဗက်ဖာနန်ဒက်ဇ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Gabriela၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သည်ဟုထင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Enrique Yanez Ramirez ၊ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အမည်မှာ Enrique ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကူညီသည့်စာအုပ်ကိုနားလည်ရန်သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာ။ ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်မုန်ညင်းစေ့အရွယ်နှင့်တူသည်ကိုသင်အနည်းငယ်သာသင်သိလိမ့်မည်။ ဒီထက်ပိုပြီးမင်းကြည့်ချင်တဲ့ဘဝဟာလှပတင့်တယ်တယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
Enrique Yanez Ramirez အားပြန်ပြောပါ
ချားလ်စ် Benitez Ovelar ဟုသူကပြောသည်
Isabel, ဒီဟာကိုလုပ်ခြင်း၏အကျိုးစီးပွားကိုနိုးထစေဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရှာရမယ်ထင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကင်းမဲ့ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါဌ်တော်နှင့်အညီကြွယ်ဝပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သင်ကျော်လွှားနိုင်သည့်ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်အလင်းကိုလင်းစေပါ သင့်ကား၏ဘက်ထရီကုန်သွားသကဲ့သို့သင်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဖြည်းဖြည်းအားသွင်းရန်လိုသည်။
ချားလ်စ် Benitez Ovelar အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ Isabel၊ မင်းအတွက်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုငါအကြံပြုချင်တယ်။ Autoboicot၊ မင်းကိုရှေ့ဆက်မသွားနိုင်အောင်နံရံတွေနဲ့အတားအဆီးတွေကိုဘယ်လိုထားရတယ်ဆိုတာပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်မကျော်လွှားနိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းမှာသင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နေသောနံရံများနှင့်သင်မည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ရန်စတင်လေ့လာရန်စတင်ပါ။ အကြံပေးချက်တစ်ခုတည်း - သင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်သင်ဟာနှိမ့်ချမှုအများကြီးလိုအပ်တယ်၊ မင်းလုပ်လိမ့်မယ်
Guillermo Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
Braulio ဟိုဆေး Garcia Peña ဟုသူကပြောသည်
ငါအနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုကတော့သံချေးတက်နေသောသံချပ်ကာနိုက်နှင့်ငါထောက်ခံသော candida erendida ဖြစ်သည်
Braulio Jose Garcia Peñaအားပြန်ပြောပါ
Dolores Ceñal Murga ဟုသူကပြောသည်
Dolores Ceñal Murga သို့ပြန်သွားပါ
Juan Jose lopez garcia က ဟုသူကပြောသည်
ဒီစာမျက်နှာကိုဖန်တီးသူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ လူတွေကသူတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးလိုအပ်လိမ့်မယ်၊ စပိန်မှာလူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြသနေပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့နားထောင်နေရင်းအဲဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသူ ၂၇၀၀ ကျော်ရှိနေပြီ။ ဤအအော်ဒီယိုစာအုပ်များမှဖြစ်ပျက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။
Juan Jose Lopez Garcia ကိုပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူသားတွေကကျွန်ဘဝရောက်ဖို့လိုတယ်၊ သူတို့ကအရမ်းလိုအပ်နေလို့ပဲ။
၎င်းတို့တွင်လူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအထောက်အကူမပြုသည့် "တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော"၊ "narcissistic" နှင့် "mezquino" စိတ်ဓာတ်ရှိရုံသာမက၎င်းတို့ကိုဖတ်သူများအတွက်ဝိသေသလက္ခဏာပြcrisisနာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒံယေလ၊ မင်းတို့စာတွေအကုန်လုံးဖတ်ပြီးဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ မင်းမျက်လုံးထဲကစာလုံးတွေကခုန်နေတာကိုမမြင်ဘဲမနေနိုင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည်အလွန်နှိမ့်ချသောအမြင်ကိုယုံကြည်သည်၊ ၎င်းသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကူညီလိုသူများကိုကူညီသည်။ အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်မကူညီလျှင်၎င်းသည်သင့်အားရှုပ်ထွေးစေလျှင်သင်နေထိုင်နေခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း။
အကယ်၍ ဤအရာသည်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်သည်သင်နှင့်နီးစပ်သောလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးသင်ကထိန်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးခြင်းမရှိတော့ခြင်းကြောင့်သင်ရလဒ်ကိုမကြိုက်ပါ။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးမကောင်းဟုသင်ဆိုပါစို့။ သူတို့အားစာအုပ်များ။ Namaste - ??
ကြီးမားတဲ့ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီစာမျက်နှာကအလွန်ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော့်ကိုအမြဲတမ်းရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့၊ ငါမတွေးမိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့အန to တရာယ်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​အထူးသဖြင့်လှပတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုဖို့၊ ငါတို့ဘ ၀ မှာဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတာငါ့သမီးတွေကိုသင်ပေးဖို့ဘ ၀၊ အဲဒါကိုအသက်ရှင်ဖို့သင်ယူဖို့ပဲလိုတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းတွေကိုနားထောင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးတဲ့စာရေးဆရာအားလုံးကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ခင်ဗျားလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်နဲ့မင်းကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်၊ မယုံနိုင်စရာကောင်းပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ လူအများအပြားအတွက်ဆိုလိုတာကသင့်အတွက်တိုးတက်မှုအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခြေအနေများကြောင့်သင့်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ။ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ပွေ့ဖက်နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ သင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ပါ၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်အတူတနင်္ဂနွေနေ့များကိုကောင်းစွာနားဆင်ပါ။
ဤမှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Georgina ။ ငါဖတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာအလွန်အသုံးဝင်သောအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် မင်္ဂလာပါ, Milagritos35
ဒီဈငါရှာနေခဲ့ရာ !!! ငါကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဒံယေလ !!!
ဤစာအုပ်များသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်ကိုသာကူညီသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းတို့သည် "patch-like" ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သောကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်သူတို့၏ပြproblemsနာများကိုထာဝရနှင့်အပြည့်အဝဖြေရှင်းလိုလျှင်၊ သခင်ယေရှုဖြစ်သောအကောင်းဆုံးဆေးနှင့်စကြဝuniverseာ၏အကောင်းဆုံးဆရာဝန် ...
Christian fernando mendoza ဟုသူကပြောသည်
Christian Fernando Mendoza ကိုပြန်ပြောပါ
တင်ဆက်မှုအားလုံးကကောင်းတယ်၊ ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းအောင်တင်ချင်ရင်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်နှစ်ခုထဲကခေါင်းစဉ်တွေကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။
သံချေးတက်နေသောသံချပ်အင်္ကျီထဲမှနိုက်သည်ကောင်းပြီ၊ ပုလင်းနတ်ဆိုး၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်များပြားသောစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုကျေးဇူးတင်ကြသည်။
hitalo Rossell ayala ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါဒံယေလကျွန်တော့်နာမည် Hitalo Roossell Ayala ပါ။ ငါ Santa Cruz de la Sierra Bolivia မှပါ။ သင်လုပ်နေတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုချီးကျူးပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဝမှုကိုစိတ်ဝင်စားကြသည့်မင်းများကဲ့သို့သောသူများရှိတာကိုသိရလို့ကျွန်တော် ၀ မ်းသာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘဏ္freedomာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းနှင့် robert kiyosaky မှစာအုပ်များနှင့်အခြားတိုးတက်မှုစာအုပ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ ယနေ့သင်၏အလုပ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာသင်ဟာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားသည်။
hitalo rossell ayala သို့ပြန်သွားရန်
မင်းရဲ့စကားလုံး Hitalo အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုဘလော့ဂ်ကိုဆက်သွားဖို့အားပေးတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒံယေလကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဘာပြောမလဲငါနေ့တိုင်းစကားသံများနားထောင်ရန်စာမျက်နှာသို့ဝင်သည်။ အားလုံးကောင်းတယ်၊ အဲဒါကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ဒီစာရေးဆရာတွေလို၊ မင်းလိုသူတို့ကိုပြန့်နှံ့စေတဲ့သူတွေရှိတယ်။
အဲလက်စ် Rovira ၏စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဤသဘောထားနှင့်မျှဝေနိုင်သည့်စွမ်းရည်သည်သင့်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ပါစေ။ သင်ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်သောအရာများသည်သင်၏စည်းစိမ်ဥစ္စာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်ဤဘလော့ဂ်ကိုများစွာပေးအပ်ခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Valeria၊ သင့်လိုမှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်
အထောက်အကူအများဆုံးစာအုပ်များ, အတိုက်အခံကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အာရုံကြောများ, စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီ။ ကျော်လွှားခြင်းအတွက်စာအုပ်များမှသာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အကျိုးအမြတ်အတွက်စာရေးသူများ၊ ထုတ်ဝေသူများနှင့်စာကြည့်တိုက်များဖြစ်သည်။
Carlos Pinto အားပြန်ပြောပါ
မင်းရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒံယလေ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကူညီနိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်မကြာမီကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖတ်ပြီးသောTomásGarcía Castro ၏ "Beyond Stress" ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောလူတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလူတိုင်းအားအကြံပြုခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်စာစီစာကုံးအသစ်၊ ဖတ်ရန်လွယ်ကူပြီးစိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်စေရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည်။
ငါ Beyond Stress ကိုလည်းဖတ်ပြီးပြီ၊ ၎င်းရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ကိုက်ညီတယ်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောစာအုပ်ဖြစ်ပြီးကွဲပြားခြားနားပြီးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ငါလူတိုင်းကိုအကြံပြုပါသည်
Fabio Leonardo Porras Alarcon ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့သဲလုံးအတွက်ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုဆုချလိမ့်မယ်လို့ Og Mandino ထံမှထပ်မံသိလိုပါတယ်
Fabio Leonardo Porras Alarcon အားပြန်ပြောပါ
ဝိညာဏဉာဏ်ပညာ Dan milan ... ဤစာအုပ်များစွာကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်ကြိုက်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်နှင့်မရောထွေးရန်သတိပြုပါ။
တစ် ဦး ကလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ "The Alchemist" လီယိုနာဒိုသည်ကျွန်ုပ်အားအကြံပြုလိုသည့်စာအုပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Rose Contreras ဟုသူကပြောသည်
အဆိုပါ catalog အလွန်ကောင်းလှ၏။ ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့်၎င်း၏ဖန်တီးသူမှကျေးဇူးတင်စကား။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမှတ်ချက်ပေးလိုသည်မှာ“ Prometheus သည်အလွန်အမင်းချည်နှောင်ထားခြင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ဝတ္ထုဖြစ်သော်လည်းအပန်းဖြေစာပေဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကိရိယာများကိုပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Rosa Contreras အားပြန်ကြားပါ
Raúl S ကို Castillo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဤစာမျက်နှာသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်ကိုတွေ့ရသောမှတ်ချက်များကိုသာဖတ်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းအသံစာအုပ်များမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။
Raúl S Castillo အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းတယ် albert ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ မင်းဒီစာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာရေးဆရာကိုရှာဖွေနိုင်အောင်ကူညီပါ ဦး ။ ငါ၌ဤအချက်အလက်များသာရှိသည်။ စာရေးသူသည် MIT (မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်) တွင်အထူးပြုဘာသာရပ်သုံးခုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ စိတ်ပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာ ၂ ခုကိုငါထင်သည်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်အားဒေါ်လာငါးသောင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမည်သို့ ၀ င်ငွေရရန်မမှားနိုင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ , ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
albert bonito အားပြန်ကြားပါ
တစ်စုံတစ် ဦး က“ သင့်အတွင်းထဲ၌လူကိုခိုင်ခံ့စေပါ” ဟူသောစာအုပ်ကိုစာရေးသူ၏အမည်မှာ Jean Cadillac ဖြစ်သည်
Self- အကူအညီစာအုပ်တွေ ဟုသူကပြောသည်
ဂျိုးဇက်မာဖီနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအောင်မြင်မှု (၇) ချက် - Deepak Chopra (Medlchisedec ၏စာချုပ် - Alain Houel) ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
Self- Help စာအုပ်များတုံ့ပြန်ပါ
Andreina seprum ဟုသူကပြောသည်
သင်တို့ရှိသမျှသည်အလွန်ကောင်းသော, တစ်ချိန်ချိန်ကျနော်တို့အကူအညီလိုအပျ, လက်ရှိငါ Linda Palomar, အတွင်းပိုင်းပါဝါနှင့်ပတ်သက်။ Hilary လက်ကမ်းစာစောင်နှင့်အတားအဆီးများစွာမရှိဘဲဘယ်လိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ဘယ်လို "ငါချိုးငှက်တက် fucked" အကြံပြုပါသည်။ (အမေဇုံတွင်)
Andreina Seprum အားပြန်ပြောပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရTomásGarcía Castro ရေးသားသော "Beyond Stress" စာအုပ်ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည် ၀ တ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ရဲကြံစည်မှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေမှုအပြင်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုအပြုသဘောဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်စီမံရန်အတွက်မရေမတွက်နိုင်သောအကြံဥာဏ်များကိုပေးသည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပြproblemနာမရှိဘဲဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
ပျောက်ဆုံးနေခြင်းသည် Talane Miedaner ရေးသားသော "အောင်မြင်မှုအတွက်နည်းပြ" စာအုပ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ယနေ့အထိကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးသောကူညီမှုစာအုပ်။
Pau B. သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးစာအုပ်က - CLEMENTE FRANCO JUSTO မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလပ်ချိန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်မှု။
MARIA FERNANDA သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ဘဝအတွက်ဒosophနိကဗေဒစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
ဤစာအုပ်များအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်ဖူးပြီးသောအချို့မှာကမ္ဘာပေါ်တွင်ရောင်းသူအများဆုံးဖြစ်သည်။ Living Voice - Divinity - Living Death စာအုပ်ကိုအခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ၎င်း၏ရေးသားသူကမျှဝေသည်။ ခေါင်းစဉ်ကို google search engine တွင်ထည့်ခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
မာရီယာ Evangelina Burgalat Abarca ဟုသူကပြောသည်
စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေဟာစာပေအငတ်ဘေးကြုံချိန်မှာနီးနေပြီ၊ ငါအားလုံးနီးပါးကိုဖတ်ပြီးပြီ ... ဒါကြောင့်ငါကတခြားသူတွေကိုရှာနေတာငါနောက်မှဒီမှာလာတွေ့နိုင်တယ် ...။ လှပသောစာအုပ်များလက်ထဲရောက်ရန်အခွင့်အရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Maria Evangelina Burgalat Abarca အားစာပြန်ပါ
ပါပလော Garcia ဟုသူကပြောသည်
အဆိုပါဝါး Warrior (Bruce Lee) ။ Francisco Ocana
ကိုး Revelations, James Redfield
သံချေးတက်နေသောသံချပ်ကာမှနိုက်။ Robert Fisher
သင့်ဘဝကိုကုသပါ။ Louise hay
ဝိညာဉ်ရေးရာဖြေရှင်းနည်းများ။ Deepak Chopra
ငြိမ်းချမ်းသောစစ်သည်တော်။ Mark Millar
သင်၏အိပ်မက်များသည်သင့်ကိုယူသွားသည့်နေရာ / Destiny ဟုခေါ်သည့်နေရာတစ်ခု။ Javier Iriondo
ဗုဒ္ဓ, အလင်း၏မင်းသား။ ရာမီရိုလမ်း
သင်၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန်စည်းမျဉ်း ၃၃ ခု။ Jesus Cajina
စစ်၏အနုပညာ။ Sun Tzu
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိအခြေအနေတွင်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်၌နေထိုင်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူပြproblemsနာများရှိသည်။ သူမနှင့်အတူရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကရှိခဲ့ဖူးသောပုဂ္ဂိုလ်၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ ငါပျောက်သွားသောအရာအားလုံး၊ ငါကုစားရန်လိုသည်၊ သေးငယ်သောကောင်းကင်တမန်၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်လိုသောဆန္ဒ၊ ကတိကဝတ်များနှင့်ရင့်ကျက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကိုမဆုံးရှုံးချင်ပါ။ စာဖတ်သူများထံသို့ကျွန်ုပ်သင်၏အတွေ့အကြုံမှတစ်ဆင့်သင်သွားပါ။ စာအုပ်တစ်အုပ်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
တောတွင်းမိုရီ Rios ဟုသူကပြောသည်
မှားယွင်းသောစွဲချက်မပါဘဲသတင်းအချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသောဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတင်ဆက်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုခေတ်သစ်နည်းပညာကို ရည်စူး၍ စာမဖတ်တော့ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအစဉ်အလာအရလုပ်ရပ်တွေ၊ ဘဝကိုကိုယ်ကျင့်တရားအထောက်အပံ့၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆပ်စရာမလိုဘဲပေးခဲ့သောဘ ၀ အတွေ့အကြုံများရဲ့သင်ကြားမှုနှင့်စာအုပ်တွေကသူတို့ရဲ့အခင်းအကျင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့ဘဝရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့၊ အဲဒီအချိန်ကိုနားလည်ဖို့ လူတိုင်းအတွက်တစ်နေ့တာသည်ပိုနည်းသည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူသားတို့အတူတကွနေထိုင်ရန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြီးထွားရန်၊ သဟဇာတဖြစ်သော၊ ငြိမ်းချမ်းသောတည်ရှိမှု၏အမည်ခံစံပြကိုဖော်ဆောင်ရန်အချိန်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်ယာယီလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သည်းခံခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်မဆုံးရှုံးရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်သူများအားပိုမိုကောင်းမွန်သောလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေး၏ဖြတ်သန်းသွားလာမှုနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ တရားမျှတမှုနှင့်ဘုံငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်းတို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များနှင့်ထိုက်တန်ကြောင်းထောက်ခံအားပေးရန်အတွက်ပိုမိုဖတ်ရှုသင့်သည်။
Selva Morey Rios သို့ပြန်သွားပါ
မှားယွင်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်မှားယွင်းသောစိတ်စွန်းကွက်မှုများမရှိဘဲသတင်းအချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသောဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတင်ဆက်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုခေတ်သစ်နည်းပညာကို ရည်စူး၍ စာမဖတ်တော့ပါ။ သို့သော်၊ ထိုလုပ်ရပ်များ၏အလယ်အလတ်အဆင့်၊ ဘဝ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအထောက်အပံ့၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆပ်ရန်အတွက်မည်သည့်စျေးနှုန်းမှမပေးဘဲတောင်းဆိုထားသည့်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံများ၏သင်ကြားမှုများနှင့်ဘဝ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သောရှာကြံသည့်စာအုပ်များသည်ထိုအချိန်ကိုနားလည်ရန် လူတိုင်းအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနည်းပါးသည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူသားတို့အတူတကွနေထိုင်ရန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြီးထွားရန်၊ သဟဇာတဖြစ်သော၊ ငြိမ်းချမ်းသောတည်ရှိမှု၏အမည်ခံစံပြကိုဖော်ဆောင်ရန်အချိန်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်ယာယီလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သည်းခံခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်မဆုံးရှုံးရပါ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းနောက်လိုက်များအနေဖြင့်ကမ္ဘာမြေအကူးအပြောင်းနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ တရားမျှတမှုနှင့်ဘုံငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များနှင့်ထိုက်တန်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအားထောက်ခံအားပေးရန်ပိုမိုဖတ်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
ဂျိမ်းစ်အယ်လင်မှ "လူတစ် ဦး မည်သို့တွေးသည်" ၏သုံးသပ်ချက်